Izinqolobane Ezigciniwe Zase-European Food Safety
Isiphathimandla Sezokuphepha KwaseYurophu
ECAMBRIA, eCalif. - Emi ogwini obheke ipulazi lakhe elisenkabeni yeCalifornia, umfelokazi omusha uTeri McCall ubona umyeni wakhe uJack cishe yonke indawo. Lapho, esicongweni segquma eliphakeme kakhulu, yilapho abashadikazi abashada khona ngo-1975- ababili abazichaza ngokuthi “ama-hippies” ababazi kangcono ngokuntweza phezu kwepulazi. Futhi ngaphezulu lapho, kuzungezwe ulamula, izihlahla ze-avocado nezi-orenji uJ i-ack itshaliwe, ihlala indlu engamamitha-skwele angama-800 umakadebona osemusha waseVietnam eyakhele umakoti wakhe nomndeni okhule waba namadodana amabili nendodakazi. Ama-solar solar Jack asungulwe ngotshani obumiswe yilanga ngamandla epulazi ngenkasa.
Futhi ezansi lapho, kufihlwe emgodini wesigodi esiluhlaza se-velvet kuhlala indlu yasepulazini eneminyaka eyikhulu uJack noTeri ekugcineni benza ikhaya labo unomphela. UJack ufake iwindi lengilazi elinamabala elinenhliziyo nezimbali ngaphezulu komnyango wangaphambili.
“Ngempela izikhathi ezingamakhulu ngosuku, kunokuthile okungikhumbuza ngaye,” kusho uMcCall, ngenkathi yena nesivakashi behamba bengena ezingadini zezithelo ekuseni ekuseni libalele entwasahlobo. "Le yingxenye yokuthi kungani kunzima ukukholwa ... angisophinde ngimbone."
U-Anthony 'Jack' McCall, 69, ushone ngoDisemba 26 ngemuva kwempi ebuhlungu futhi exakayo ne-non-Hodgkin lymphoma. Ukulahleka nakanjani, kulungiswa unomphela ebuhlungwini benhliziyo bomndeni wakhe. Kepha imibuzo yokuthi kungani washaywa kanjani nokuthi kanjani - indoda engakaze ibheme, ukuhlala iphilile futhi engenawo umlando wesifo somdlavuza emndenini wayo - iyingxenye yalokho abanye ochwepheshe bezomthetho abakubona njengophawu olungaba yingqophamlando isimangalo esisemthethweni ngokumelene nenye yezinkampani ezinkulu zezolimo emhlabeni, iMonsanto Co.
UMcCall ugweme ukusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane epulazini lakhe, ngaphandle kwe-herbicide ebizwa ngeRoundup - emakethwa yiMonsanto njengenobuthi obuphansi ngokweqile. Wayesebenzisa i-Roundup njalo, ezitshiza yena epulazini ukubuyisa ukhula olukhathazayo. Waze wancoma i-Roundup kubangani, ebatshela ukuthi kufanele iphephe kakhulu kunezinye izindlela emakethe, futhi athi ukusebenza kwayo.
Kodwa manje ekufeni kwakhe, uMcCall ungomunye wabamangali abaningana emacaleni angaphezu kweshumi nambili athi isithako esisebenzayo eRoundup - ikhemikhali elibizwa ngokuthi i-glyphosate - sabanikeza umdlavuza, nokuthi iMonsanto kudala yaziwa ngokuthi i-glyphosate idala "izingozi ezinkulu empilweni yabantu, kuhlanganise nengozi yokudala umdlavuza. ”
Amacala, abalethwe ngabamangali ku California, EFlorida, Missouri, Delaware, EHawaii,nakwezinye izindawo ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, isimangalo seMonsanto sinobufakazi obufihliwe, futhi sisebenzise abalawuli nomphakathi ukuthi bakholelwe ekuphepheni kwe-glyphosate, eletha minyaka yonke cishe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5, noma ingxenye yesithathu yokuthengiswa okuphelele, komkhulu wezamabhizinisi ezolimo. NjengoMcCall, abaningi balima, noma basebenza emisebenzini yezolimo lapho babehlala besebenzisa khona noma bevezwa yi-glyphosate.
Izimangalo ziza ngesikhathi esibucayi seMonsanto nomkhiqizo wayo wesiginesha njengabalawuli e-United States nakwamanye amazwe abheka ukuthi aqhubeke yini nokuvumela ukubulala ukhula lwe-glyphosate. Ngonyaka odlule ochwepheshe bomdlavuza beWorld Health Organisation bahlukanisa i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu. Leli thimba, i-International Agency for Research on Cancer (IARC), lithe i-glyphosate ikhombisa a “Ukuhlangana okuhle” kwe-non-Hodgkin lymphoma.
Imiphumela yempi yezomthetho kanye nokubuyekezwa kwemithetho ingaba nemithelela ebanzi. IGlyphosate yi-herbicide esetshenziswa kakhulu emhlabeni, efuthwa emasimini okutshala izitshalo ezifana nommbila, ubhontshisi kanye nokolweni, kanye nezinhlobonhlobo zezithelo, amantongomane nezitshalo zemifino ezinjengama-alimondi, ama-apula, ama-cherry namawolintshi.
Leyo ndima etholakala yonke indawo edlalwe yi-glyphosate isho ukuthi ukumangalelwa, kusho abameli babamangali, kukhomba ukuqala kwegagasi lezenzo zomthetho ezibhekiswe kuMonsanto. Amaqembu abameli abelokhu ewela izwe lonke egcwala abamangali abathi bangaba ngamakhulu futhi mhlawumbe izinkulungwane. Kungumkhuba ovivinywe isikhathi ngabameli babamangali abalethe izenzo ezifanayo esikhathini esedlule mayelana nezimboni zikagwayi, ezemithi nezamakhemikhali.
"IMonsanto ifihle ngamabomu noma icindezele imininingwane ngezingozi zomkhiqizo wayo," kusho ummeli wokungcola kwemvelo namakhemikhali uRobert F. Kennedy Jr., osiza ekubhekaneni namacala e-glyphosate. “Lokhu kukhulu. Kukuwo wonke amapulazi emhlabeni. ”
UKennedy ubikezela ukuthi amacala esikweletu se-glyphosate azosabalala njengoba sekube ngamashumi eminyaka enkantolo nge-asbestos, ebonakala emibuthanweni yezomthetho njengesenzo esithatha isikhathi eside kunazo zonke emlandweni wase-US. I-asbestos yayisetshenziswa iminyaka njenge-retardant ephephile futhi esebenzayo embonini yezokwakha kepha iboshwe kwizifo zamaphaphu nomdlavuza, futhi yakhipha amakhulu ezigidi zamaRandi kwizicelo zomthetho.
Icala le-glyphosate ngokwengxenye liyizibuko zempi yasenkantolo iMonsanto ibilokhu ilwa iminyaka eminingi ibandakanya ama-biphenyls anezinwele, noma ama-PCB akade enziwa. Abamangali kulawo macala nabo bathi ama-PCB abangele ukuthi bagule ngenkathi uMonsanto efihla izingozi. IMonsanto ithi abamangali abakwazi ukuxhumanisa ngokuqinisekile ukugula nokuchayeka kwe-PCB.
PHAKATHI KWEZINKETHO EZIPHEPHILE
Ilungelo lobunikazi yiMonsanto futhi yathengiswa ngonyaka we-1974, i-glyphosate herbicide sekuyisikhathi eside icatshangelwa njengezindlela eziphephe kakhulu zokubulala izinambuzane emakethe. Umbulali wokhula uqhamuke nelungelo lobunikazi ngo-2000 futhi manje ususetshenziswa emikhiqizweni engaphezu kuka-700 emhlabeni jikelele, ithandwa ngabalimi, abaninikhaya nabagcini bamabala. Leli khemikhali umuthi wokubulala ukhula osetshenziswa kakhulu emhlabeni onamakhilogremu alinganiselwa ku-1.8 billion asetshenziswe ngo-2014, aphindaphindwe ama-12 kusukela ngo-1994, ngokusho kocwaningo olusanda kushicilelwa.
Kepha njengoba ukusetshenziswa kukhule, ukukhathazeka ngokuphepha nakho kuye kwanda. Izinsalela zibhalwe phansi ngabaphenyi bakahulumeni nabazimele ezindleleni zamanzi, emoyeni, ekudleni nasesiketsheni somzimba womuntu. Izifundo eziningi zesayensi zibophele ikhemikhali kumdlavuza nakwezinye izinkinga zempilo ngaphambi kokwahlukaniswa nge-IARC ngoMashi 2015.
Abameli babamangali emacaleni e-glyphosate bathi phakathi kobufakazi bokuthi ubuthi be-glyphosate kudala baziwa imemo ye-EPA echaza ukuthi i-glyphosate yahlukaniswa kanjani ososayensi bezinhlangano njenge-carcinogen yabantu ngo-1985 ngaphambi kokuhlukaniswa ngo-1991 "njengobufakazi bokuthi akuyona i-carcinogenicity" yabantu. Ukuhlukaniswa kwashintshwa yize amanye amalungu wokubuyekezwa kontanga engavumelani. Amacala abikwa futhi abeka nobufakazi bokukhwabanisa emalabhorethri asetshenziswa iMonsanto ukwenza izifundo zobuthi ze-glyphosate, futhi akhomba kwizigwebo zokukhwabanisa zabaphathi kulawo malabhu.
I-Monsanto ezinze eSt. Louis, indawo yezolimo yezolimo nembewu yomhlaba, icaphuna ubufakazi bayo obuphikisana nobuqotho bezinsolo ezisenkantolo, kanye nokutholwe yi-IARC. Ngonyaka odlule, inkampani waqasha iqembu lochwepheshe ukubuyekeza ukuphepha kwe-glyphosate, futhi wathi lelo thimba akatholakalanga izixhumanisi zomdlavuza.
"Ucwaningo olunzulu lwesikhathi eside lobuthi oluphindaphindwe eminyakeni engama-30 eyedlule luye lwabonisa kaninginingi ukuthi i-glyphosate ayinakwenzeka ukuthi ibe nomdlavuza kubantu," IMonsanto ithi kuwebhusayithi yayo. 'Iziphathimandla ezilawulayo kanye nochwepheshe abazimele emhlabeni jikelele babuyekeze izifundo eziningi zesikhathi eside / ukubulawa komzimba kanye nezifo ze-genotoxicity futhi bayavuma ukuthi kukhona abukho ubufakazi bokuthi i-glyphosate… idala umdlavuza, ngisho nangezilinganiso eziphakeme kakhulu. ”
Abameli beMonsanto bebelokhu ukufuna ukuxosha kanye / noma ukubambezeleka amacala amaningana kuze kube manje afakwa, eqinisekisa ukuthi umthetho wesifundazwe kanye nokugunyazwa yi-Environmental Protection Agency yamalebula emikhiqizo ye-Roundup herbicide kuvikela iMonsanto kwizimangalo ezisenkantolo. Ezimpikiswaneni zakamuva eNkantolo yesiFunda e-US eNyakatho California, abameli baseMonsanto baphikisa ngokuthi "I-EPA iphindaphinde ukuthi i-glyphosate akuyona i-carcinogen." Kodwa ngo-Ephreli ijaji likahulumeni eCalifornia lakhipha isinqumo sokuthi iMonsanto yayingavikelekile ekubhalisweni kwe-EPA kanye namalebula avunyiwe.
In icala laseMissouri ukuthi iMonsanto nayo ayikwazanga ukuxoshwa, ukutholakala kuyaqala, futhi abameli babamangali balinde ngokulangazela lokho abanethemba lokuthi kuzoba yindawo yokugcina amagugu kumakhasimende abo.
Izimangalo zomthetho ziza ngasikhathi sinye lapho abalawuli base-Europe nabase-US bezihlola ngokwabo ukuphepha kwe-glyphosate futhi bebheka nemingcele, izinqubo eziye zagcwala ukuphikisana nezinsolo zokuchema kubo bobabili abalandeli nezitha ze-glyphosate. I-European Food Safety Authority (i-EFSA) kusho uNovemba lobo bufakazi buthi i-glyphosate akunakwenzeka ukuthi ibe yi-carcinogenic. Kepha iPhalamende laseYurophu lithe ukusetshenziswa kwe-herbicide kufanele kufakwe kabusha nge ukuvinjelwa ekusetshenzisweni okungewona okobungcweti namaphethelo namapaki okudlala ngenxa yezinkinga zezempilo.
I-EPA bekufanele ikhiphe ukuhlolwa okusha kobungozi ku-glyphosate cishe unyaka owedlule, kepha imise inqubo phakathi kwesiyaluyalu. Futhi ngendlela exakile ku-saga, ngo-Ephreli 29, i-ejensi uthumele idokhumenti yangaphakathi to iwebhusayithi yayo, ekhombisa ukuthi ochwepheshe be-EPA bokuhlola umdlavuza banqume ukuthi i-glyphosate “Akunakwenzeka ukuthi ibe yiCarcinogenic Kubantu.”
NgoMeyi 2, i-EPA yahoxisa imemo kwi-website yayo yathi bekungafanele ikhishwe ngoba ukuhlolwa komdlavuza kuyaqhubeka. Kepha iMonsanto imemezele ukukhishwa kwedokhumenti njengobufakazi balokho ebikusho ngokuphepha kwe-glyphosate.
AbakwaWall Street bagcina iso elibukhali enkantolo. Kepha ngokuvamile ababukeli bezimakethe abanandaba kangako ngengozi yeMonsanto evela ekukhokhelweni kwesikweletu okungaba khona nangaphezulu nganoma iyiphi imali engenzeka yesikhathi eside uma abalawuli bezokhawulela noma bavimbele i-glyphosate, kusho umhlaziyi kaPiper Jaffray uBrett Wong, olandela amasu ebhizinisi kaMonsanto nempilo yezezimali. Izimpi zasenkantolo zingaba nomthelela kubalawuli, esho.
"Kusobala ukuthi kunamacala amaningi," kusho uWong. “Ababalulekile ekuthinteni ibhizinisi labo kepha kuhlale kunengcindezi yemizwa kubatshalizimali. Ukube bekungaba nomthelela ekwakhiweni kwezomthetho futhi i-glyphosate ibingavunyelwe… lokho bekungaba nomthelela. ”
Ochwepheshe bezomthetho abanesipiliyoni sokuvikela imboni yamakhemikhali babheka la macala ngentshisekelo, futhi abaningi bathi ngenxa yokuntuleka kokusekelwa okulawula ukuxhumeka komdlavuza, abameli babamangali banokukhuphuka umqansa ukwenza lezo zimangalo zinamathele.
“Ubufakazi bokuxhasa lezi zimangalo abukho, kusho ummeli odumile, enqaba ukucashunwa ngegama. “Akusilo ubisi lomama nganoma iyiphi indlela. Bengingeke ngiyixube esiphuzweni sami, kodwa ingenye yamakhemikhali aphephe kakhulu laphaya, ”kusho yena.
Ummeli uBrent Wisner, omele umndeni wakwaMcCall, uthe uyaqiniseka ngamandla obufakazi obumelene noMonsanto. “Kuzoba ngamacala amakhulu ngokwedlulele uma konke kushiwo futhi kwenziwa. Siyethemba ukuthi sizokwazi ukukhombisa ukuthi ucwaningo lweMonsanto lwalulawula futhi lucindezela isayensi, ”kusho yena.
Emuva eCambria, indodana kaJack McCall uPaul McCall uqhuba ipulazi esikhundleni sikayise. Amehlo akhe adabuka ngokushesha lapho ebuzwa ngokutholakala kukayise ngoSepthemba 2015 nokufa ezinyangeni ezintathu kuphela kamuva, usuku olulandela uKhisimusi. Akafuni ukukhuluma ngecala, ngaphandle kokuthi akasenayo i-glyphosate manje, futhi ufuna ukuxwayisa abanye basuke kulo.
"Le yimpi okumele ilwiwe," esho.
Ukuthi icala likhulu kangakanani futhi ligazi kangakanani kusengumbuzo ovulekile. Ukumemeza okuvela ezinhlangothini zombili zezinkinga kuya ngokuya kuzwakala usuku ngalunye oludlulayo. Kepha imibuzo ejulile ngokuphepha kwalomuthi wokubulala ukhula ifanele ibuyekezwe ngokujulile nangokwesayensi njengoba izimpendulo zibamba iqhaza ekukhiqizeni kwethu ukudla, imvelo yethu kanye nempilo yemindeni yethu esikhathini esizayo.
Lesi sihloko ekuqaleni savela Huffington Post.
UCarey Gillam uyintatheli yakudala yeReuters, umbhali / umhleli wamanje ozimele kanye nomqondisi wezocwaningo we-US Right to Know, iqembu elicwaninga ngomkhakha wezokudla
Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane UCarey Gillam, I-EFSA, EPA, Isiphathimandla Sezokuphepha KwaseYurophu, glyphosate, UJack McCall, Monsanto, i-non-Hodgkin lymphoma, RoundUp